Ahoana ny famolavolana tranokala, e-varotra, na rafitra loko fampiharana | Martech Zone
Nizara lahatsoratra vitsivitsy momba ny maha-zava-dehibe ny loko amin'ny marika iray izahay. Ho an'ny tranonkala iray, tranokala e-varotra, na fampiharana finday na tranonkala, dia tena zava-dehibe ihany koa izany. Misy fiantraikany amin'ny:
Ny fahatsapana voalohany momba ny marika iray sy ny lanjany - ohatra, ny entana lafo vidy matetika dia mampiasa mainty, mena dia midika fientanentanana, sns.
Fanapahan-kevitra momba ny fividianana - ny fitokisan'ny marika iray dia azo faritana amin'ny fifanoheran'ny loko. Ny loko malefaka dia mety ho vehivavy kokoa sy azo itokisana kokoa, ny fifanoherana mahery vaika dia mety ho maika kokoa ary mitondra fihenam-bidy.
Fampiasana sy traikefa amin'ny mpampiasa - loko manana psikolojia ary koa ny fiantraikany ara-batana, ka mahatonga azy io ho mora kokoa na sarotra kokoa ny mivezivezy amin'ny mpampiasa interface tsara.
Inona no maha-zava-dehibe ny loko?
85% n'ny olona no nilaza fa misy fiantraikany lehibe amin'ny zavatra hovidiny ny loko.
Ny loko dia mampitombo ny fanekena marika amin'ny salan'isa 80%.
Ny fahatsapana loko dia tompon'andraikitra amin'ny 60% amin'ny fanekena na fandavana ny vokatra iray.
Rehefa mamaritra ny rafitra loko ho an'ny tranonkala iray, dia misy dingana vitsivitsy amin'ny antsipiriany ao amin'ny infografika miaraka aminy:
Loko voalohany – Mifidiana loko mifanaraka amin'ny angovon'ny vokatrao na serivisinao.
Action Colors - Tsy hita ao amin'ny infografika eto ambany izany, fa ny famantarana ny lokon'ny hetsika voalohany sy ny lokon'ny hetsika faharoa dia tena manampy. Izy io dia mampianatra ny mpihaino anao hifantoka amin'ny singa interface tsara amin'ny mpampiasa mifototra amin'ny loko.
ADditional Colors - Mifidiana fanampiny loko mifameno ny lokonao voalohany, ny loko tsara indrindra mahatonga ny loko voalohany anao Pop.
Loko lafika - Misafidiana loko iray ho an'ny lafin'ny tranokalanao - mety tsy dia mahery setra kokoa noho ny lokonao voalohany. Ataovy ao an-tsaina ihany koa ny maody maizina sy maivana.. mihamaro ny tranokala mampiditra loko amin'ny maody maivana na maizina.
Loko karazana - Misafidiana loko iray ho an'ny lahatsoratra izay ho ao amin'ny tranokalanao - tadidio fa tsy fahita firy ny endri-tsoratra mainty matevina ary tsy soso-kevitra.
Ohatra, ny orinasako Highbridge namolavola marika an-tserasera ho an'ny mpanamboatra akanjo izay te hanangana tranokala e-varotra mivantana amin'ny mpanjifa ahafahan'ny olona manao izany mividy akanjo an-tserasera. Takatray ny mpihaino kendrenay, ny lanjan'ny marika, ary - satria nomerika ny marika indrindra fa nanana vokatra ara-batana ihany koa - nifantoka tamin'ny rafitra loko izay niasa tsara tamin'ny printy (CMYK), paleta lamba (Pantone) izahay, ary koa ny nomerika (RGB sy Hex).
Fanandramana tetika loko miaraka amin'ny fikarohana tsena
Mafy ny dingana nataonay tamin'ny fifantenana ny loko.
Nanao fikarohana ara-barotra momba ny andiana loko fototra miaraka amin'ny mpihaino kendrenay izahay izay nampihena anay ho loko tokana.
Nanao fikarohana ara-barotra momba ny andiana loko faharoa sy fahatelo miaraka amin'ny mpihaino kendrenay izahay izay nametrahanay tetika loko sasany.
Nanao fanesoana vokatra izahay (famonoana vokatra, marika tenda, ary marika mihantona) ary koa ny fanesoana e-varotra miaraka amin'ny rafitra loko ary nanome izany ho an'ny mpanjifa sy ny mpihaino kendrena ho valin-kafatra.
Satria niankina betsaka tamin'ny vanim-potoanan'ny vanim-potoana ny marika, dia nampidirinay tao anatin'ilay fangaro ihany koa ny lokon'ny vanim-potoana. Ity dia mety ho ilaina amin'ny fanangonana manokana na sary ho an'ny doka sy fizarana media sosialy.
Nandalo io dingana io im-polo mahery izahay talohan'ny nametrahanay ny drafitra farany.
Raha mavokely mavokely sy volondavenona maizina ny loko marika, dia novolavolainay ny loko hetsika ho aloky ny maitso. Loko miompana amin'ny hetsika ny maitso ka tena safidy tsara izy io mba hisarihana ny mason'ny mpampiasa anay amin'ireo singa miompana amin'ny hetsika. Nampidirinay ny fifandimbiasan'ny maitso ho an'ny hetsika faharoa ataonay (sisin-tany maitso misy fiaviana fotsy sy lahatsoratra). Manandrana loko maitso matroka kokoa ihany koa izahay amin'ny lokon'ny hetsika ho an'ny hetsika hover.
Hatramin'ny nanombohanay ny tranokala dia nampidirinay ny fanaraha-maso ny totozy sy ny sarintany mafana mba hijerena ireo singa izay mahasarika ny mpitsidika anay ary mifandray amin'ny ankamaroany mba hahazoana antoka fa manana rafitra loko izay tsy mijery fotsiny izahay… mandeha tsara.
Loko, Espace Fotsy, ary Toetran'ny singa
Ny famolavolana rafitra loko dia tokony ho tanterahana amin'ny alàlan'ny fitsapana azy amin'ny seha-pifaneraserana amin'ny ankapobeny mba hijerena ny fifandraisan'ny mpampiasa. Ho an'ny vohikala etsy ambony dia nampidirinay ihany koa ny sisiny manokana, ny padding, ny drafitra, ny taratra sisintany, ny kisary ary ny endri-tsoratra.
Nanatitra torolalana momba ny marika feno ho an'ny orinasa izahay mba hizarana anatiny ho an'ny fitaovana ara-barotra na vokatra. Tena zava-dehibe amin'ity orinasa ity ny tsy fiovaovan'ny marika satria vaovao izy ireo ary tsy manana fahalalana amin'ny indostria amin'izao fotoana izao.
Ity ny voka-dratsin'ny tranokala e-varotra miaraka amin'ny tetika loko
Closet52 Pejy fandraisana
Pejy fanangonana Closet52
Closet52 Pejy vokatra
Tsidiho ny Closet52
Fampiasana loko sy fahajambana loko
Aza adino ny fitsapana azo ampiasaina amin'ny fifanoherana loko amin'ny singa ao amin'ny tranokalanao. Azonao atao ny manandrana ny drafitrao amin'ny fampiasana ny Fitaovam-panadinana fidirana amin'ny tranokala. Miaraka amin'ny rafitra lokoy, fantatray fa manana olana mifanohitra amin'izay hataonay eny an-dalana izahay, na mety manana safidy ho an'ny mpampiasa anay mihitsy aza. Mahavariana fa ambany dia ambany ny mety hisian'ny olana momba ny loko amin'ny mpihaino kendrena.
Ny fahajambana loko dia ny tsy fahafahana mahita ny fahasamihafana eo amin'ny sasany amin'ireo loko azon'ireo mpampiasa manana fahasembanana tsy miloko afaka manavaka. Ny fahajambana loko dia misy fiantraikany amin'ny dimy ka hatramin'ny valo isan-jaton'ny lehilahy (10.5 tapitrisa eo ho eo) ary latsaky ny iray isan-jaton'ny vehivavy.
Ny ekipa ao amin'ny WebsiteBuilderExpert dia nanangona ity lahatsoratra momba ny infografika sy amin'ny antsipiriany ity Ahoana ny fisafidianana loko ho an'ny tranokalanao tena feno tanteraka izany.
Tags: loko hetsikaloko ambadikaloko marikaloko miantso ny hetsikaefi-trano52lokotetika lokolokoloko ecommercerafitra loko e-varotrafomba fitsapana lokotsena fikarohanarafitra loko fampiharana findayloko voalohanyloko faharoamifantina lokolokon'ny ambaratongafitsapana loko rafitrafitsapana loko rafitraloko karazanafamolavolana interface tsara ho an'ny mpampiasaMalagasy famolavolanaweb design
Sellfy: Amboary ny orinasanao e-commerce mivarotra vokatra na famandrihana ao anatin'ny minitra
Shopify: Ahoana ny fandrindrana ny lohahevitry ny lohahevitra mavitrika sy ny famaritana Meta ho an'ny SEO mampiasa Liquid